Waxyaabo kale oo bilaash ah oo loogu talagalay Microsoft Office | Wararka Gadget
Waxyaabo kale oo bilaash ah xafiiska Microsoft
Ignacio Sala | | Aplicaciones, Software
Tan iyo markii ficilkeedii ugu horreeyay, 31 sano ka hor, Microsoft Office wuxuu noqday mid dhammaystiran tixraaca adduunka xisaabinta marka aad abuureyso nooc dukumeenti ah, ha ahaato dukumiinti qoraal ah, xaashiyo ama bandhig. Dhowr sano hadda, sida kaliya ee loo isticmaalo waa iyada oo loo marayo rukun.
Haddii aan wax yar ka baarayno khadka tooska ah, waxaan heli karnaa ruqsad hal sano ah oo aan ugu adeegsan karno Xafiiska 365 xoogaa yuuro ah. Si kastaba ha noqotee, haddii baahiyahaaga ha marin tirada badan ee ikhtiyaarrada ah ee Xafiiska waxay naga heleysaa iyada oo loo marayo barnaamijyadeeda waaweyn, hoosta waxaan ku tuseynaa bedellada ugu fiican ee bilaashka ah ee Microsoft Office.
Iyadoo aan loo eegin waxa shaqadeennu noqon doonto, waxay u badan tahay inaan ku keydinno dhammaan faylashayada daruurta, ha noqoto Google, Apple, Microsoft ama wixii kale. Inaad karti u leedahay inaad si toos ah uga tafatirto faylasha daruurta adigoon ku soo dejisan qalabkeena waa mid ka mid ah howlaha ugu waaweyn ee qof walba u soo bandhigi karo U soo bandhig farqiga ugu badan ee isticmaalayaasha.
Xafiiska 365 wuxuu ku saleysan yahay fikirkaas, maadaama shatigiisa kaliya uusan noo oggolaaneynin inaan ku isticmaalno barnaamijyadeeda internetka, ama noocyada laga soo dejiyey kombuyuutarkeena, laakiin sidoo kale wuxuu na siiyaa meel lagu keydiyo aad uga sarreeya waxa ay na siiso xisaabta fudud ee Microsoft, 5 murugo leh GB.
Ka hor intaadan raadsan bedel xafiiska Microsoft, sidoo kale waa inaan tixgelin siino barta aan rabno inaan ku isticmaalno, maadaama ay kuxirantahay midka uu noqon doono, waxaan heysanaa hal ama ikhtiyaarro kale, dhamaantood si isku mid ah ayey u wada siman yihiin, in kastoo mararka qaar ay aad u kala duwan yihiin.
1.1 La jaan qaada dhammaan kombuyuutarrada iyo moobillada
2 Bogagga, Nambarada, iyo Nuxurka
2.1 La jaan qaada macOS marka lagu daro iOS
3.1 La jaan qaada dhammaan barnaamijyada desktop
4 Xafiiska WPS
4.1 La jaan qaada dhammaan kombuyuutarrada iyo moobillada
5.1 La jaan qaada dhammaan barnaamijyada desktop
6 Kee baa fiican?
La jaan qaada dhammaan kombuyuutarrada iyo moobillada
Haddii aadan rabin inaad ku adkaato noloshaada soo degsashada codsiyada aad si dhib yar ugu isticmaali doontid kombiyuutarkaaga, xalka ugu fiican ee aan gacanta ku hayno waxaa lagu magacaabaa Google Docs, xafiiska xafiiska Google ee u taagan labada dhinac: looma baahna in lagu rakibo kombuyuutarkeena (inkasta oo ay shaqeyn karto haddii aan dooneyno inaan shaqeyno internet la'aan), maadaama ay ku socoto shabakadeena (haddii ay Google Chrome ka fiican tahay) waa mid ka mid ah kuwa ugu fudud suuqamaadaama tirada xulashooyinka jira ay aad u kooban yihiin.
Docs, Sheets iyo Slides waa magaca beddelka Word, Excel iyo Powerpoint ee Google na siiso. Si aad fikrad uga hesho tirada xulashooyinka ay Google Docs na siiso, waxaan dhihi karnaa codsiga Windows WordPad waxay si ficil ahaan ah noo siisaa shaqooyin isku mid ah sida Docs, waxaa laga yaabaa in kan dambe ay ku jiraan qaar kale.
Google Docs waxaa loogu talagalay dhammaan adeegsadayaasha u baahan codsi si ay u abuuraan dukumiinti qoraal ah, xaashiyaha ama bandhigyada si aad u dhacsan. Waxa fiican waa taas waa lacag la'aan iyo isku dhufasho badan, sidaa darteed waxaan ka heli karnaa kana abuuri karnaa aaladda qalab kasta, ha noqoto mobile ama desktop.
Bogagga, Nambarada, iyo Nuxurka
La jaan qaada macOS marka lagu daro iOS
Apple waxay na siisaa Xafiiskeeda, oo horey loo oran jiray iWork, oo ah barnaamij ka kooban Bogag, Tirooyin iyo Muhiimad u dhiganta kala ah Word, Excel iyo Powerpoint siday u kala horreeyaan. Iyadoo ay run tahay in tirada xulashooyinka la heli karo aan u sarreyn sida XafiiskaMarkay sannaduhu sii socdaan, tiradaasi way sii kordheysaa maantana waa wax ka badan bilaash ansax ah oo bilaash ah oo loogu talagalay dadka isticmaala alaabada Apple.
Bogagga, Nambarada iyo Muhiimka, sidoo kale waxaa laga heli karaa macruufka dhammaan faylashana waxaa lagu kaydiyaa daruuraha, sidaa darteed waan awoodnaa sii wadista sameynta dukumiintiyada halka aan kaga tagnay iPhone-ga, iPad-ka ama Mac-ga. Qoraalkan Apple, sababo muuqda awgood, waxaa kaliya loogu heli karaa wax soo saarka Apple, markaa haddii aadan haysan Mac, waad iska illoobi kartaa. Laakiin haddii aad haysato, waa bedelka ugu fiican ee bilaashka ah ee hadda laga heli karo suuqa.
La jaan qaada dhammaan barnaamijyada desktop
OpenOffice waxaa loo heli karaa Windows iyo Mac iyo Linux labadaba. Waxay ku hoos jirtay dalladda Oracle iyo Sun Microsystems, sidaa darteed kama hadlayno software tayo-yar. OpenOffice gadaashiisa waxaan ka helnaa seddex codsi oo u dhigma Word, Excel iyo Powerpoint, oo leh tiro shaqooyin badan iyo waafaqsanaanta qaabka ay adeegsato Microsoft dokumentiyadaada.
Kaliya laakiin aan ka helno barnaamijkan ayaa ah in kastoo aan awoodno inaan furno dukumiintiyada qoraalka, xaashiyaha iyo bandhigyada Xafiiska, uma dhoofin kartid feylasha qaababkan.
Qeyb kale oo codsiyo ah oo loo bixiyo beddel ahaan xafiiska ayaa laga helayaa Xafiiska WPS, oo ah barnaamijyo codsiyo asal ahaan ka soo jeeda Aasiya, taas oo waxyar inyar u suurtagashay in ay boos ka helaan suuqa. Mashruucani wuxuu ku dhashay sidii Kingsoft Office 1988, sidaas waa mid ka mid ah kuwa ugu da'da weyn in aan hadda ka heli karno suuqa.
Qoraa, Buug-gacmeedyo iyo bandhigyo, waxay u dhigantaa Word, Excel iyo Powerpoint oo WPS OFfice ay na siiso. Qolalkaan waxaa lagu heli karaa bilaash si aad u soo dejiso. Waxaan sidoo kale gacanta ku haynaa qayb lacag bixin ah oo shaqooyin badan qabta, laakiin inta badan isticmaalayaasha, nooca aasaasiga ahi wuu ka badan yahay intaas. Xafiiska WPS waxaa laga heli karaa Windows, macOS, Linux, iOS, iyo Android.
Waxaan ku dhammeyneynaa soo koobista beddelaadaha bilaashka ah ee Microsoft Office LibreOffice, mid ka mid ah xulashooyinka ugu caansan ka mid ah isticmaaleyaasha go'aansaday sanado ka hor in ay ka baxaan qolka Microsoft gebi ahaanba. Si ka duwan Xafiiska Microsoft, LibreOffice wuxuu ka kooban yahay codsiyo kala duwan si loo abuuro feylal kala duwan, hadey yihiin dukumiinti qoraal ah (Qoraa), xaashiyahaCalc), Abuur oo tafatir qaaciidooyinka xisaabta (Xisaabta), wax ka bedel sawirada dulinka (Isku Aadka) ama keydka macluumaadka Base.
Qaabka ay isticmaaleyso Libreoffice waa ODF, waa qaab laga yaabo inaad la kulantay waqti ka waqti. Si kastaba ha noqotee, waa 100% la jaan qaadaya qaababka Microsoft ee hadda jira iyo kuwa dhaxalka leh, sidaa darteed iswaafajinta ayaa ka badan dammaanad. Kaliya laakiin aan ka helno LibreOffice ayaa ah in loo heli karo oo keliya Windows, macOS iyo Linux, oo aan lahayn barxadaha moobiilka.
Kee baa fiican?
Dhinac waxay kuxirantahay nidaamka qalliinka aan adeegsano. Haddii aan isticmaalno macOS, ikhtiyaarka ugu fiican, sidaan soo sheegay waa Apple's Pages, Numbers and Keynote. Haddii aan raadineyno iswaafajin ikhtiyaarka ugu fiican waa LibreOffice. Laakiin haddii waxa aan raadineyno ay yihiin isku dhufasho, Google Docs ayaa ah barxada na siisa xulashooyinka ugu badan.
Waa in lagu xisaabtamo waqti kasta taas barnaamijyadan midkoodna isku dherer ma aha mana waayi karno si la mid ah Xafiiska, tan ugama jeedo inaan dhigo geesinimo, xiriiriyeyaal, miisas iyo waxyaabo la mid ah. Isticmaalaha joogtada ah waa ikhtiyaar aad u fiican, laakiin maahan shirkadaha waaweyn.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » Aplicaciones » Waxyaabo kale oo bilaash ah xafiiska Microsoft
Dhammaadka taageerada Windows 7 Maxaan sameyn karaa?